लेखक ललिता दोषीसँग ३ प्रश्न | Ketaketi Online
Home » लेखक ललिता दोषीसँग ३ प्रश्न
लेखक ललिता दोषीसँग ३ प्रश्न
posted by ketaketionline on Thu, 11/02/2017 - 22:27
साहित्यकार ललिता ‘दोषी’ को कामकाजी नाम ललिता (गजुरेल) खरेल हो । उहाँ वि.सं. २०२५ कार्तिक १६ गते इमाडोल ललितपुरमा जन्मनु भएको हो । उहाँको पहिलो रचना वि.सं. २०४१ सालका ‘शुभकामना’ शीर्षकको कविता श्रुति पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । उहाँको पहिलो प्रकाशित कृति प्रेमको परिभाषा (कथा संग्रह, २०५६) हो । उहाँका हालसम्म २७ वटा कृतिहरु प्रकाशित भएका छन् ।
केटाकेटी अनलाइन पत्रिकाको यस पटकको ३ प्रश्नमा यिनै वरिष्ठ लेखक ललिता दोषीसँग कुराकानी गरिएको छ ।
प्रश्न १. तपाईं बालसाहित्य किन लेख्नुहुन्छ ?
बालबालिकालाई मनोरञ्जन तरिकाले केही कुरा भन्दा त्यो कहिल्यै बिर्सिंदैनन् । त्यसको साथसाथै उनीहरूले घुमौरो किसिमले शिक्षा पनि पाइरहेका हुन्छन् । आफूले भोगेका, जानेबुझेका कुरा उनीहरू सामु पु¥याउँदा भाइबहिनीहरूले मन पराएका छन् । पाठ्यक्रममा समेत बाल रचनाहरू परेका छन् । त्यसैले पनि निरन्तर लेखिरहेकी छु ।
२. पछिल्लो पटक तपाईंको कुन बालपुस्तक प्रकाशित भएको थियो ? त्यस कृतिको बारेमा केही भनिदिनुस् न ।
पछिल्लो पटक मेरो ‘जाल’ नामक बालचित्रकथा रुम टु रिडबाट २०७२ सालमा प्रकाशित भएको थियो । यो चित्रकथाले मान्छेले हरेस खानुहुन्न । मेहनत गर्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ । मान्छेलाई माछा मारेर दिनुभन्दा माछा मार्ने सीप दियो भने मान्छेले दुःख पाउदैनन् भन्ने सन्र्दभ दिएर लेखिएको छ । खुसीको कुरा यो चित्र कथाले २०७३ सालमा पुष्कर गौतम बालसाहित्य पुरस्कार पायो । यो कथा कोरियन भाषामा पनि छापिएको छ ।
३. बाल्यकालको बिर्सनै नसक्ने सम्झना कुनै छ भने सुनाइदिनुस् न ।
मेरो अति नै मिल्ने नारणदेवी श्रेष्ठ भन्ने साथी थिइन् । उनी मलाई अति नै माया गर्थिन् । म पनि उनलाई अति नै माया गर्थेँ । उनी बालकुमारी बस्ने म इमाडोलमा बस्ने भए पनि लगनखेलमा भएको नमुना मच्छिन्द्र मा. वि. स्कुलमा जाने आउने हामी सँगै गर्दथ्यौँ । उनीहरूको पसल थियो । पैसा धेरै खर्च गर्थिन् । कुनै खानेकुरा किने पनि मलाई छुट्ट्याउदैन थिइन् । म भने त्यति पैसा खर्च गर्न सक्दैनथेँ । मलाई उनले दिएको धेरै खानेकुरा खाँदा अलि नमज्जा नै लाग्थ्यो । मैले एकदिन स्कुलबाट घर फर्किंदा नारणदेवी तिमी मसँग हिँड्दा धेरै पैसा खर्च नगर ल त्यस्तै के भनें । उनी यति रिसाइन् कि उनी मसँग बोल्दै बोलिनन् । मैले पछि पनि उनीसँग धेरै बोल्न चाहेँ उनी बोलिनन् । विवाहपश्चात भने मैले उनको बहिनीसँग फोन नं. लिएर फोन गरेँ । राम्रै कुरा भयो । मलाई अहिले पनि नारणदेवीको असाध्यै माया लाग्छ । उनी निश्छल मनकी थिइन् र छिन् पनि । सानोमा राम्रो साथी गुमाएको पीडा मलाई पछिसम्म भयो ।